Guri | Hovesin(DG) Industrial Co.,Ltd.
S60 xiritaanka Smart
S60 waa naqshad cusub oo quful albaab ah, oo loo adeegsaday qaab-dhismeedkii ugu dambeeyay, oo ku habboon dhammaan albaabbada aluminium ee 30mm-80mm, albaabbada alwaaxda iyo albaabbada amniga. Dhanka kale la jaan qaada noocyada kala duwan ee maaddada loo yaqaan 'mortise'. 6 furid siyaabo, kuwaas oo ku xirmi kara taleefanka gacanta iyada oo loo marayo WIFI ama Bluetooth, waxayna maamuli kartaa qufulka albaabka caqliga leh wakhti kasta iyo meel kasta. Waxaa si weyn looga isticmaalaa adduunka oo dhan.
H50 Smart quful
H50 waa quful albaab toos ah oo casri ah oo otomaatig ah oo ka samaysan zinc alloy oo wata tikniyoolajiyad otomaatik ah oo cusub oo lagu furo oo lagu xiro albaabbada adigoon gacmahaaga istcimaalin. 6 furid siyaabo, kuwaas oo ku xirmi kara taleefanka gacanta iyada oo loo marayo WIFI ama Bluetooth, waxayna maamuli kartaa qufulka albaabka caqliga leh wakhti kasta iyo meel kasta. Waxay kuu keeni doontaa khibrad nololeed oo caqli badan.
H10 Smart quful
$ $> Naqshad fudud oo xarrago leh, Dhanka kalena la jaanqaadaysa noocyo kala duwan oo loo yaqaan 'mortise'. 6 furid siyaabo, kuwaas oo ku xirmi kara taleefanka gacanta iyada oo loo marayo WIFI ama Bluetooth, waxayna maamuli kartaa qufulka albaabka caqliga leh wakhti kasta iyo meel kasta
124 aragtida· December 02.2020 78